Samsung Galaxy S4 ကိုလုံးဝအခမဲ့သော့ဖွင့်နည်း | Androidsis
Francisco Ruiz | | Samsung, လုံခွုံရေး, လဲ tutorial
သီအိုရီအရ, အော်ပရေတာများ၏အလေ့အကျင့် သင့်ကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောလက်ကိုင်ဖုန်းများကိုရောင်းချခြင်း၎င်းသည်တရားဝင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမဟုတ်ပါ သော့ဖွင့်ကုဒ် မည်သည့်တယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီနှင့်အတူကအသုံးပြုနိုင်မှ terminal ကို၏။ မင်းသိချင်လား ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းအခမဲ့ရှိမရှိမည်သို့သိရမည်နည်း?
သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံ၌၎င်းသည်မပြည့်စုံသေးသကဲ့သို့ယနေ့တွင်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့လွတ်မြောက်ရေးလမ်းကိုဆောင်ကြဉ်းပေးသည် Samsung ရဲ့ Galaxy S4 modelo GT-I9505, ကိုယျ့ကိုယျကိုနှင့် လုံးဝအခမဲ့.
မပြောနိုင်ပါ Androidsis ပါ မင်းရဲ့စက်ကိရိယာမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုငါကိုယ်တိုင်လည်းမသိပါဘူး၊ စာမှညွှန်ကြားချက် ထူးဆန်းတာဘာမှမဖြစ်သင့်ဘူး၊ တစ်ခုတည်းသောအရာကငါတို့အသစ်စက်စက်ကိုရလိမ့်မယ် Samsung ရဲ့ Galaxy S4 လုံးဝအခမဲ့နှင့်အလုပ်အတွက်တစ်ပြားမှပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ။
ပထမဆုံးလုပ်သင့်တာကတော့တယ်လီဖုန်းခလုတ်ဖွင့်ပြီးဖုန်းခေါ်ပါ * # 0011 #ကြှနျုပျတို့မီနူးခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးပြန်ရွေးခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်ပေါ်လာသည့် drop-down menu ကိုနှိပ်ပါ ပြန်.နောက်တဖန် menu menu ကိုနှိပ်ပြီး option ကိုရွေးပါ သော့ချက် Inputကျနော်တို့ရေးသားခဲ့သည် 1 ကျနော်တို့ mode ကိုဝင်ရန်လက်ခံပါ ဝန်ဆောင်မှုစနစ်.
အခုငါတို့နောက်တဖန်နှိပ် မီနူးခလုတ် နောက်တဖန် နောက်ကွယ်မှပေါ်လာတဲ့မျက်နှာပြင်အသစ်မှာပထမဆုံးရွေးစရာကိုရွေးပါလိမ့်မယ် UMTS.
ယခုပထမခေါ် option ကိုထပ်မံရွေးချယ်ပါ debug မျက်နှာပြင် ပြီးတော့ option ကိုနံပါတ် ၇.၂ ဖုန်းထိန်းချုပ်မှု.
ဒီမျက်နှာပြင်အသစ်မှာ option ကိုရွေးပါ ၆ ကွန်ယက်သော့ခတ်ခြင်း.
ယခုငါတို့ခေါ်တတိယ option ကိုရွေးပါ PERSO SHA256 OFF
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်၏အဓိက menu ကိုပြန်သွားပါလိမ့်မယ် ဝန်ဆောင်မှုစနစ် မီနူးခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးနောက်ပြန်သို့မဟုတ်နောက်သို့။
ယခုငါတို့ option ကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ် ၄ အဖြစ်များသော ပြီးတော့ option ကိုနံပါတ်6NV ပြန်လည်တည်ဆောက်.
ဒီမျက်နှာပြင်အသစ်မှာ terminal ဆိုတာကaရှိတယ်ဆိုတာကိုပြတယ် Golde Backup ကိုနံပါတ် option ကိုနှိပ်ပါ4Backup ကို Restore.
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်အားလုံးကိုမှန်ကန်စွာလိုက်နာပြီးပါက terminal သည်အစပိုင်းတွင်ပိတ်ဆို့ထားသကဲ့သို့ဆက်လက်ရှိနေလိမ့်မည် အလိုအလျောက်ပြန်လည်စတင်လိမ့်မယ် ကျနော်တို့အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူခဏကျန်ကြွင်းလိမ့်မည်ပေမယ့်, အပြာအပေါ် ဦး ဆောင်နှင့် capacitive ခလုတ်နှစ်ခုလုံးအပေါ်လည်း။
ဤဖြစ်စဉ်သည်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်သုံးနာရီလောက်ကြာလိမ့်မည်။ သင်နိုးလာသောအခါငါတို့ပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည် Samsung ရဲ့ Galaxy S4 မည်သည့်ကုမ္ပဏီအတွက်မဆိုလုံးလုံးလျားလျားဖြန့်ချိပြီးတရားဝင်ဖြစ်စေ၊ ဤအရာအားလုံးကိုတစ်ပြားမှမသုံး၊ Samsung Galaxy S4 ကို root လုပ်နည်း ကလွှတ်ပေးရန်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Play Store မှနောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုရယူပါ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Samsung Galaxy S4 model GT-I9505 ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့အခမဲ့ဖွင့်ရမလဲ
39 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ဟိုင်း၊ ငါမာစီလိုနဲ့ဒီလွှတ်ပေးရေးနည်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်၊ ငါ I9505 terminal နှစ်ခုကို ၀ ယ်လိုက်ပြီးတစ်ခုထဲကတစ်ခုကဒီနည်းနဲ့ထွက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကြိုးစားကြည့်လိုက်ရင်ငါအမှားတစ်ခုပေးပြီးမထုတ်ပေးဘူး။
၎င်းသည်၎င်းတို့သည် software ကိုတစ်နေရာရာတွင်ဖြေရှင်းပြီးပြီဖြစ်ရာ၎င်းကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုသို့မဟုတ်လျှောက်လွှာတစ်ခုကို၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်စောင့်ဆိုင်းပါ၊ သို့မဟုတ်သင်ယခင်နည်းလမ်းကိုလုပ်သည်။ သင်သည်အခြားအော်ပရေတာတစ်ခုမှ sim အသစ်ကိုရိုက်သောအခါ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုငွေပေးချေပြီးနောက်ရရှိနိုင်သော network unlock code ကိုတောင်းလိမ့်မည်။ imei မှသင်၏မိုဘိုင်းကိုသော့ဖွင့်ရန်ကမ်းလှမ်းသော (စတိုးဆိုင်များ) ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာက ၁ ချပြီးသော့နှင့်လက်ခံပြီးနောက် ... ကျွန်ုပ်သည်မီနူးထဲသို့ဝင်ခွင့်မပြုပါ။
ငါနဲ့ထပ်တူဖြစ်ခဲ့တယ် မင်းလုပ်ရမယ့် rom ကိုပြောင်းရမယ်။
ငါက Samsung ကနေနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည့် xuamdn, flashed ။
ငါအဲဒီမီနူးထဲကိုဝင်လို့ရတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီမှာလုပ်တဲ့အဆုံးရဲ့သင်ခန်းစာပါပဲ။ ပြီးတော့ sim အသစ်ကိုထည့်လိုက်ရင် network unlock ကုဒ်ကိုမေးတယ်။
အမှတ်အသား Q1 အစား0ခဏစောင့်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်အချိန်အနည်းငယ်ကြာသည်
မျက်နှာပြင်ကအနက်ရောင်နှင့်အလင်းများမလင်းမချင်းကျွန်ုပ်ခြေလှမ်းအားလုံးကိုလိုက်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ s4 သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ငါဘာလုပ်နိုင်မလဲ?
မင်္ဂလာပါ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အာမခံချက်ဆုံးရှုံးသွားသည်။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းကို Android 4.3 (တရားဝင်) သို့မွမ်းမံနိုင်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဤနည်းလမ်းသည်သင့်အတွက်အကျိုးရှိပါက၎င်းသည်တရားဝင်အာမခံချက်သို့မဟုတ် OTA update စနစ်အားမဆုံးရှုံးပါစေနှင့်။
မင်္ဂလာပါကောင်းပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်ဤနည်းလမ်းကိုကြိုးစားပြီးပါက input key ကိုထည့်။ ၁ ကိုထည့်သောအခါပြန်လည်ထိတွေ့ပါက UMTS ရှိသော menu အသစ်ကိုမရရှိပါကယခုကျွန်ုပ်၏ I1 ကိုမည်သို့ထုတ်လွှတ်ရမည်ကိုမသိပါ။ : S
ငါ 1 နေရာချပြီးနောက်အဓိက menu ကိုမပြဘူးသောတူညီသောပြproblemနာရှိသည်။ ငါဘာလုပ်သင့်လဲ??
ကျနော်တို့အတူတူပင်ပြproblemနာနှင့်အတူ3... အကူအညီနဲ့
Nadia tischelman ဟုသူကပြောသည်
ငါမှာထပ်တူပြproblemနာရှိတယ်၊ ၁ ကိုတင်တယ်၊ UMTS ကိုရွေးဖို့အဓိက menu ကိုမပြဘူး။ ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
Nadia Tischelman အားပြန်ပြောပါ
1 ကိုနှိပ်ပြီးသောအခါ Menu မပေါ်လာသည့်ပြproblemနာအတွက် Mobile Modem ဗားရှင်းက၎င်းကိုခွင့်မပြုသောကြောင့်သင်ဗားရှင်းကို Odin ဖြင့်ယခင်ကူးယူပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုသည်။ အဲဒါကိုကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ခြေလှမ်းတွေကိုလိုက်လျှောက်ပြီးတဲ့နောက်မိုဘိုင်းက sim ရဲ့သော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုတောင်းနေတုန်းပဲ၊ အဲဒါဟာငါ့အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အဲဒါမဟုတ်ဘူးလားမသိဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မရဲ့ rom 4.4.2 ဆိုတော့ Odin နဲ့ rom 4.2 ကို install လုပ်နိုင်မလားစမ်းကြည့်ပြီးပြီ။ ဒီအဆင့်တွေကိုထပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။
ငါအရင်မှတ်ချက်မှာမှားခဲ့တယ်၊ ငါပြောင်းမယ့် version ကတော့ 4.3 Stock ပါ။
ကောင်းပြီကြည့်ရအောင်ငါတရားဝင် ROM ကိုရောင်းချသူပရိုဂရမ်များမထားပဲ၊ မီနူးများကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန် modem ကိုပြောင်းလိုက်တယ်။ ဒါတွေအားလုံး Odin နဲ့။ အရာရာတိုင်းဟာပြီးပြည့်စုံတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုပြန်လည်စတင်ဖို့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာငါ့ကိုအမှားအယွင်းတစ်ခုအမြန်ပေးပြီးပြန်ဖွင့်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အားဖြင့်၊ မျက်နှာပြင်ဟာမရပ်တန့်ဘဲ၊ LEDs များပေါ်က၊ ပုံမှန် reboot၊ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။
အဲဒီမှာမျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုစွန့်ပစ်ဖို့ဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ မဆိုဖြေရှင်းချက် ??
သငျသညျစင်ကြယ်သော informati လျှင်သင်တို့၏အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
Sebastian Reyes ဟုသူကပြောသည်
ဟိုင်း၊ Vico ထပ်တူဖြစ်ပျက်သည်၊ မီနူးပေါ်လာမည်မဟုတ်ပါ၊ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကန့်သတ်ထားသည်
Sebastian Reyes ကိုပြန်ပြောပါ
ငါသည်ဤသင်ခန်းစာ၏ခြေလှမ်းများအားလုံးလိုက်နာခဲ့ကြပြီး 'Restore Backup' ကိုနှိပ်ပါသောအခါ၊ ပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်သောဖုန်းကို restart လုပ်၍ error message ရလာသည်။
Carlos လိုပဲကျွန်တော်လည်းအတူတူပဲ၊ တစ်ယောက်ယောက်ကဒါကိုဖြေရှင်းမလားကြည့်ရအောင်
1 ကိုထည့်သောအခါပထမနည်းသည်ဤပုံစံနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်မည်ကိုကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်ထင်သည် ၂၀ မှ ၁ အတွက်အကျိုးရှိသည်
အမီသည်အခြားမီနူးသို့ * # 0011 # ကိုသာဝင်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မ ၀ င်နိုင်သည့်မီနူးသို့မဝင်ရ
ကွန်ယက်သော့ခတ်ခြင်းတွင် PERSO SHA256 သတင်းအချက်အလက်ကိုသာကျွန်ုပ်ရနိုင်သည်။ အဖွင့်အပိတ်တွင်မည်သည့်လက္ခဏာမဆိုအကြောင်းပြချက်ကိုမည်သူကသိသနည်း။
ရာဖေးလ်၊ ကျွန်တော်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်၊ networklock တွင်ရွေးစရာတစ်ခုသာပေါ်လာသည်။ သင်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီနိုင်လျှင်။
umts menu ကိုမရတဲ့သူများအတွက်, 1 အစား Q0000 ကိုထည့်ပါ။ ဤကဲ့သို့သောအရာကငါ့ကိုစွန့်ပစ်သည်။ ပြသနာမှာကွန်ယက်သော့ကိုရောက်သောအခါသတင်းအချက်အလက်မှထွက်ခြင်းမရှိ၊
Larry က ဟုသူကပြောသည်
ငါ lp ကိုယ့်ကိုကိုယ်မြင်သည်အခြားရွေးချယ်စရာ np ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါဘယ်လိုလုပ်နိုင်သလဲ ???
Unico Altamirano ဟုသူကပြောသည်
ဟယ်လို။ ဤရွေးစရာများကို adb မှတဆင့်ကိုင်တွယ်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Unico Altamirano အားပြန်ပြောပါ
1 အစား Q0000 ကိုရွေးပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုစနစ်ထဲ ၀ င်ပါလိမ့်မည်
မည်သူမဆိုဖြေရှင်းချက်ကိုရှာတွေ့သလား On နှင့် Off option မရှိပါ။
မင်္ဂလာပါ၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်လက်ကိုင်ဖုန်းကိုစိတ်ရှုပ်ထွေးစေသလားကျွန်ုပ်မသိပါ။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤတိုင်းပြည်ရှိ Lima Peru နှင့်၎င်း၏မိုဘိုင်းကွန်ယက်များအတွက်ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှန်မမှန်သိလိုသည်။ ငါ့မှာ s4 9515l ရှိတယ်၊ ပြီးတော့သူက bitel ကိုသာဖတ်တယ်။ ကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖတ်ပြီးရွှေ့ချင်ပါတယ် ကြိုပြီးကျေးဇူးပါပဲ
ဟိုင်း၊ imei ကိုသော့ဖွင့်သည်၊ ၎င်းသည်သော့ဖွင့်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်မဟုတ်လော
မင်္ဂလာပါ၊ Q0000 ကိုထည့်သွင်းရပါမယ်။ လေးစားပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်၌ android 5.0.1 ရှိပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ သို့သော် perso sha256 ဖြင့်မျက်နှာပြင်သို့ရောက်သောအခါကျွန်ုပ်သည်မတော်တဆဖြေရှင်းနိုင်ရန်အကူအညီတောင်းခံသောမှတ်ချက်ကိုရေးပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဘုံရွေးချယ်မှုကိုဖွင့်ထားကြောင်းတွေ့မြင်ရပါပြီ ကန ဦး မျက်နှာပြင်, ငါငါထို option အတွက်နောက်ပိုင်းမှာအသေးစိတ်သောခြေလှမ်းများနောက်သို့လိုက်ကြပြီ, သူကအဆုံးမှဆွဲထုတ်ခြင်းနှင့် voila, သော့ဖွင့်ထားသည်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအဆင့်သို့သွားသောအခါ sha256 ကိုမတွေ့ရပါ။ ပထမဆုံးရွေးစရာတစ်ခုသာကျွန်ုပ်ရရှိပါသည်။ sha256 info ။ ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကကူညီနိုင်သည်။ ငါ့ကို ကျေးဇူးပြု၍ ???
ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူပါပဲ၊ ကျွန်ုပ်သည် Q0000 ဖြင့် ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ သို့သော် PERSO SHA256 info option တစ်ခုတည်းသာပေါ်လာလိမ့်မည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါတို့ကိုကူညီနိုင်မလားကြည့်ရအောင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Nathalie Maria Gonzalez Guinaldo ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်အားဤသူအားကျွန်ုပ်အားဤစာမပေးပါ။ SHA256 နောက်ဆုံးအဆင့်များထဲမှတစ်ခုကိုရွေးပါ။
Nathalie Maria Gonzalez Guinaldo အားစာပြန်ပါ
ဂူဂဲလ်ဒရိုက်သည် interface အသစ်၊